Baarlamaanka Dalka Itoobiya oo yeelanaya kulan looga Hadlayo Xaaladda Dalka – Kismaayo24 News Agency
Baarlamaanka Dalka Itoobiya oo yeelanaya kulan looga Hadlayo Xaaladda Dalka
by Ahmed sudani 27th February 2018 018
Baarlamaanka Dalka Itoobiya ayaa maanta oo talaado ah yeelanaya kulan deg deg ah,waxaana kulankan diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xaaladda deg degga ah ee uu dalka ku jiro.
Golaha Baarlamaanka Itoobiya ayaa la filayaa in maanta ay go’aan ka soo saaraan xaaladda deg degga ah ee uu dalka ku jiro,sidoo kalena waxaa ay kulankooda rasmiga ah ee furmaya maalinta Jimcaha ah ku ansixinayaan Ra’isalwasaaraha cusub ee Itoobiya kaas oo la filayo in isbaheysiga talada yaha uu magacaabo.
15kii Bishan waxaa xilkii ra’isalwasaaraha Itoobiya iska casilay Hailemariam Desalegn.,sida uu qoray Wargeyska Addis Standard,ayaa sheegay in Baarlamaanka laga filayo in ay isbeddel muuqda la soo loobtaan.
Xildhibaannada ayaa lagu wargeliyay in Talaadada maanta ah uu kulan jiro jimcahana ay yeelanayaan kulan kale oo go’aanno ay ka mid yihiin wax laga yeelayo xaaladda deg degga ah iyo ansixita Ra’isalwasaaraha ay yeelanayaan.
Fadhiyada Baarlamaanka waxaa kale oo la filayaa in go’aamo laga soo saaro kuwaas oo la xiriira dibadbaxyada ka socdo Gobollada Amxaarada iyo Oromada ee Dalka Itoobiya.
DegDeg:- Diyaaradaha Kenya oo duqeyn ka wada Gobolka Gedo
Sawirro:- Dowladda Soomaaliya Oo Guddi Baara U Saartay Dhacdadii AMISOM Ay Ku Dileen Askariga NISA
UNHCR: "waan soo Ceshanay Gaarigii Nagala Afduubtay"
Daawo sida Madaxweyne kuxigenka Jubbaland logu soo dhaweyay Balad Xaawo
Dagaal Khasaaro geystay oo Mudug ku dhexmaray Dad kasoo kala jeeda Galmudug & P/Land (SABABTA)